सुत्केरीको अस्पतालमा मृत्यु भएपछि…. | Mechikali Daily
सुत्केरीको अस्पतालमा मृत्यु भएपछि….
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २३ माघ २०७४, मंगलवार ०५:४८
बुटवल, । भगवती अधिकारीलाई आउँदो बुधबारका लागि सुत्केरी हुने मिति चिकित्सकले दिएका थिए । तर,उनलाई शनिबार रातिदेखि ढाड दुख्ने, पिसाब लागिरहने संकेत देखियो । माथागढी–४ पाल्पा घर भई हाल बुटवलमा (अमरपथ) परिवारसँगै बस्दै आएकी उनी साथी अन्जना श्रेष्ठका साथ आइतबार बिहान ७ बजे हिँडेरै लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, बुटवलको प्रसूति कक्षमा गइन् । नर्सहरूले उनलाई सुत्केरी व्यथा लागेको भनेर प्रसूति कक्षमा भर्ना गरे ।
भर्ना गरेको केही समयपछि उनलाई सुई लगाइदिए । सुई लगाउँदा वित्तिकै उनी छट्पटाउँदै बेहोस भइन् । नर्सहरूले लगत्तै अर्को सुई लगाइदिए । उनी बेहोस भइन् । उनलाई पम्प गर्दै नर्सहरूले आइसियुमा लगे । ‘हतार÷हतार अञ्जनालाई तपाईभित्र आउने भनेर लगे तर कुरा नर्सहरूले कुरा लुकाउन खोजे । आइसियुमा लैजाँदा भगवतीको मृत्यु भइसकेको रहेछ ।’ उनकी साथी सृष्टि पौडेलले सोमबार अस्पतालमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भनिन् । पाठेघरको मुख नखुलेको भन्दै गलत औषधि दिँदा मृत्यु दिएर मृत्यु भएको मृतक भगवतीका दाजु मोति खनालले बताए । उनले अस्पतालमा नियमित चेकजाँच गराउँदै आएकी थिइन् ।
भगवतीका आफन्तले डाक्टरहरुको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै शव उठाएका छैनन् । मृतकका परिवारले सोमबार दिनभर डाक्टरको लापरबाहीले मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै अस्पतालमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनका कारण अस्पताल दिनभर तनावग्रस्त भएको थियो ।
भगवतीका श्रीमान् पशुपति अधिकारीले घटनाको छानबिन नभएसम्म शव नउठाउने बताएका छन् । ‘चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको देखिन्छ’ पशुपति अधिकारीले भने, ‘सुरूमा ह्दयघातका कारण मृत्यु भएको भने । पछि पाठेघरको अगाडि रहेको पानीको फोका फुटेर मुटु र फोक्सोमा गएका कारण मृत्यु भएको भन्छन । कुन सुईको प्रयोग गरिएको छ हामीलाई देखाउनुहोस् भन्दा दिँदैनन् । यो पूर्ण रूपमा लापरबाहीका कारण भएको हो ।’
‘दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । मेरी श्रीमतीले जस्तो अकालमा मृत्यु वरण गर्न कसैलाई नपरोस् । मेरो छोरोेले जस्तै अन्य बालबच्चाले आमाको माया गुमाउन नपरोस्’ पशुपतिले रूँदै भने । भगवतीका ७ वर्षीय छोरा छन् । उनलाई अझैसम्म आमाको मृत्यु भएको जानकारी पाएका छैनन् ।
अञ्चल अस्पतालमा डाक्टरको लापरबाहीले बिरामी र सुत्केरीको मृत्यु हुने घटना बढ्दै गएको मृतक भगवतीका दाजु खनालले बताए । उनले भने, ‘अञ्चल अस्पतालभन्दा बाहिरबाट स्त्रीरोग विशेषज्ञ ल्याएर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’
सुत्केरी व्याथासँगै हृदयघात आएका कारण निधन भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डन डा. कृष्ण खनालले दाबी गरेका छन् । ‘पाठेघरको पानी नसाको माध्यमबाट मुटुमा गयो,त्यही कारणले मृत्यु भएको हो । यस्तो समस्या १० हजारमा २÷३ जनामा देखिन्छ ।’ मेसु खनालले घटनाको छानबिन गर्ने अश्वासन दिएका छन् । ‘मृत्युको कारणबारे विश्वास नलागे छानबिन टोली बनाएर छानबिन गरौं ।’ उनले भने, ‘छानबिनपश्चात् दोषी ठहरिए अस्पताल प्रशासन क्षतिपूर्ति दिन तयार छ । पोष्टमाटम गर्न हामी तयार छौं ।’
सोमबार बसेको मृतकका आफ्न्त, इलाका प्रशासन र बुटवल उप–महानगरपालिकाबीच बसको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ । शव मर्चरीमा राखिएको छ ।